I-China Magnetic Plate Holder ene-Changeable Pin-Pin yoLungiso lweSocket Magnet D65x10mm abavelisi kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
Inkqubo ye- ipleyiti magneticIdityaniswe nge-6pcs okanye iimagnethi ezingaphezulu ze-neodymium kunye ne-pin-pin eguqukayo. Kuvelisiwe ukufaka iziseko ezinomsonto, imikhono kwipaneli yekhonkrithi kwifom yentsimbi. Isokhethi yehexagon kunye nezikhonkwane zemisonto kulula ukuyifaka nokukhupha. Inamandla amakhulu aneemagnethi ze-neodymium kwindawo yegumbi elincinci. Amandla asusela kwi-50kg ukuya kwi-150kgs ngeendlela ezahlukeneyo zobubanzi bemisonto M8, M10, M12, M14, M18, M20. Ezinye iidayimitha, izikrufu, umthwalo wokulayisha kunye nelogo yoshicilelo lwelaser ziyafumaneka kuthi ukuvelisa, ngokweemfuno zabathengi.
Amanqaku: Ukuprinta ilogo yelogo yoMthengi kuyafumaneka njengezicelo
Egqithileyo Isinyithi Magnetic Triangle Chamfer L10x10, 15 × 15, 20 × 20, 25x25mm
Okulandelayo: Ukubamba iimagnethi zokuSasaza ii-Anchors Ukubeka kunye nokulungisa
Ukulungisa uMazibuthe weSocket
Ipleyiti yokuLungisa iMagnetic
Ipleyiti yeMagnetic Holder
Ipleyiti ebambe iMagnetic